ဆီးချို သွေးချို » ဆီးချိုရောဂါ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများ
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် နိုဝင်ဘာ 27, 2020 .2mins read
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မေမေတွေ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးလို့ရလား..... အသက် ၁၆ နှစ် ပြည့်ပြီးသူတိုင်း COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးလို့ ရပါပြီ။
ကူးစက်ရောဂါများ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဩဂုတ် 16, 2021 .2mins read
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေ ကော်လာဂျင် သောက်လို့ရလား………………….
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းတာကြောင့် အသားအရေက ကြည်လင်လှပနေသလို ဆံသားကလည်း နက်မှောင်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါဆို ဒီလိုကာလမှာရော ကော်လာဂျင်က လိုဦးမှာလား
မိခင်ကျန်းမာရေး, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေး ဇန်နဝါရီ 25, 2021 .2mins read
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလဆိုတာက မိခင်တိုင်းအတွက် ရင်အခုန်ရဆုံးကာလအပိုင်းအခြားလေးပါ။ ဒီကာလမှာ မေမေအနေနဲ့ ချင်း(ဂျင်း) စားလို့ရမလားဆိုတာကို....
မိခင်ကျန်းမာရေး, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေး ဇန်နဝါရီ 19, 2021 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 17, 2021 .2mins read